China N, N-dimethylcyclohexylamine （FENTACAT 8,） CAS NO. 98-94-2 ， DMCHA / PC8 ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Kerui Chemicals
CAS Mba. 98-94-2
Aha ahia: DMCHA / PC8
N, N-dimethylcyclohexylamine (FENTACAT 8, DMCHA, PC8) ebumnuche bụ isi bụ ihe na-akpata ụfụfụ polyurethane siri ike. N, N-dimethylcyclohexylamine（FENTACAT 8, DMCHA, PC8） bụ obere viscosity na ọkara na-arụ ọrụ amine catalyst eji maka friji, efere, spraying, na na saịtị ahụ infusion nke isiike polyurethane foams.
N, N-dimethylcyclohexylamine（FENTACAT 8, DMCHA, PC8）nwere mmetụta dị egwu na gelation na ụfụfụ, ma na-enye arụmọrụ catalytic dị mma maka mmeghachi nke ịfụfụfụ na mmeghachi omume gelation nke siri ike ụfụfụ.
N, N-dimethylcyclohexylamine（FENTACAT 8, DMCHA, PC8）nwere ihe nkwalite siri ike maka mmeghachi omume nke mmiri na isocyanate (ụfụfụ ụfụfụ), na n'otu oge Mmeghachi omume nke polyol feather isocyanate nwekwara oke catalysis.
N, N-dimethylcyclohexylamine（FENTACAT 8, DMCHA, PC8） bụ ihe siri ike mmalite maka mmeghachi ụfụfụ. Na mgbakwunye na ụfụfụ siri ike, enwere ike iji ya dị ka onye na-ebu ụfụfụ inyeaka maka ịkpụzi ụfụfụ dị nro na ụfụfụ na-enweghị isi. Ọ nwere arụmọrụ siri ike na ihe jikọtara, nnukwu mgbanwe, na nchekwa nchekwa.
N, N-dimethylcyclohexylamine（FENTACAT 8, DMCHA, PC8）juru n'ọnụ na 170 kg / drum; echekwara n'ime ebe dị jụụ ma nwee ikuku n'ime ụlọ, na-echebe site na mmiri na ikpughe anyanwụ. Oge nchekwa bụ ọnwa iri na abụọ.
N, N-dimethylcyclohexylamine（FENTACAT 8, DMCHA, PC8）bụ ihe omimi nke kemịkalụ. Biko zere ịkpọtụrụ anya na anụ ahụ n'oge eji. Ọ bụrụ na enwere onye ana-akpọ, biko sachaa mmiri buru ibu zigara ya onye dọkịta ka ọ gwọọ gị.